‘उपभोक्ता ठग्ने होसियार ! तीन लाख जरिवानामा परिएला’ - Suvham News
November 5, 2018 March 6, 2019 by gsmktm
कुनै वस्तु बिक्री गर्दा तपाईले परिमाणमा थोरै कमी गरी उपभोक्तालाई ठगी गरिरहनुभएको त छैन ? यस्तै झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्दै आउनुभएको त छैन् ? आजैदेखि उपभोक्ता ठग्ने काम बन्द गर्नुहोस्, नत्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ठूलो जरिवानामा पर्नुहोला ।
अशोक घिमिरे / रासस
Posted in अर्थ व्यापार
Tagged अर्थ व्यापार
Prevअज्ञात समूहले बिष हालिदिँदा करिब ५० लाख रुपैंया बराबरको माछा मरेको छ ।
Nextकागले एउटै मात्र जीवन साथि किन बनाउछ?